Yonke imininingwane ye-Raspberry Pi 4 | entsha Kusuka kuLinux
ULuis Lopez | | Ukuhlela
Yize amahlebezi okuqala athi ukukhushulwa okuzayo kwekhadi le-Raspberry Pi kungathatha isikhathi eside ukufika, I-Raspberry Pi 4 isiyatholakala.
Ngokwakhiwa, I-raspberry Pi 4 Model B Ibukeka ifana kakhulu ne-Raspberry Pi 3 Model B +, imodeli ye-flagship yangaphambilini. Kuyikhompyutha ekhadini elinezixhumi eziningana nosayizi wedeski lamakhadi.
Kepha, yize zibukeka zifana, konke kuvuselelwe. Iprosesa entsha isebenzisa ukwakhiwa kweCortex A72 (i-quad-core 64-bit ARMv8 ku-1.5GHz) futhi awusabophekile ukuthenga imodeli nge-512MB noma i-1GB ye-RAM, uma ufuna i-RAM eningi ungathenga i-RAM eningi. Imodeli eyisisekelo yi-1GB, kepha ungathenga nge-2 noma nge-4 GB.
Ijubane lokudlulisa libuye lavuselelwa futhi ngenxa yoshintsho olusuka ku-LPDDR2 luye ku-LPDDR4.
Ohlangothini lokuxhuma kunezinguquko ezimbili ezibalulekile, i-Raspberry Pi 4 isebenzisa iGigabit Ethernet futhi inezimbobo ezimbili ze-USB 3.0 nezimbili ze-USB 2.0, kanye nembobo ye-USB-C yokuxhuma ngogesi. I-Bluetooth iphinde yavuselelwa kusuka ku-4.2 kuya ku-5.0.
Ushintsho olukhulu lokugcina ukuthi itheku eligcwele le-HDMI lihambile ukuze lenze indlela yamachweba amabili we-Micro-HDMI, akuvumela ukuthi uxhume izibonisi ezimbili ze-4K kozimele abangama-60 ngomzuzwana usebenzisa ikhadi elilodwa.
Amanye ama-specs abukeka efana, kunokufakwa kwe-MicroSD ukuze ukwazi ukwengeza uhlelo lokusebenza nedatha yomsebenzisi.
I-Raspberry Pi 4 yethula namuhla, imodeli eyisisekelo ibiza u- $ 35, kanti imodeli ye-2GB ibiza u- $ 45 kanti imodeli ye-4GB ibiza u- $ 55.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » Yonke imininingwane ye-Raspberry Pi 4 entsha
ICanonical iyalungisa ... ama-32-bit futhi!
Iwayini 4.11 liphumile ...